Malezia: Voampanga ilay bilaogera namoaka sary hosoka misy ireo mpanao politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2019 14:01 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy efa nivoaka tamin'ny volana Febroary 2010)
Nametraka ny tatitra momba ny raharaha ny komitin'ny fiarovana Kelantan PAS, ny sekretera (Rtd) Mohamad Ibrahim tamin'ny 8 Febroary 2010 rehefa nahita ireo sary tao amin'ny aterineto tamin'ny 6 febroary. Nanamafy ny fisamborana, araka ny tatitry ny vaovao ny lehiben'ny polisy ao Johor, Mohd Mokhtar Mohd Shariff, .
Araka ny tati-baovao hafa, voatazona araka ny Fizarana 233 momba ny Lalàna mifehy ny Fifandraisana sy ny Media marolafy ilay bilaogera, lalàna mifandraika amin'ny fampiasana tsy ara-dalàna ny tranonkala na ny tolotra tambajotra amin'ny fanehoan-kevitra, fangatahana na soso-kevitra amin'ny fifandraisana izay vetaveta, sandoka, manafintohina, na nampiasaina hanararaotana, handrahonana na hanorisorenana olona hafa.
Raha voaheloka, dia mety hiatrika sazy herintaona an-tranomaizina farafahabetsany sy/na onitra tsy latsaky ny RM50.000 ilay bilaogera.
Nilatsaka fotoana fohy taorian'ny fiampangan'ny polisy bilaogera iray hafa noho ny fanevatevana ny Sultan efa maty any Johor ity fisamborana ity, ary ao anatin'ny fitsarana sodomika faharoa an'i Anwar Ibrahim.
A 44-year-old blogger has been detained for allegedly posting on the Internet doctored pictures of Kelantan Mentri Besar Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat being sodomised by Opposition Leader Datuk Seri Anwar Ibrahim.